होमपेज - Mero samachar
देश ‘१२ घण्टाभित्र चितवनबाट रमाना हुन एसपी मल्ललाई निर्देशन’ भिडियो ‘हिमालय रोडिज, सिजन ३, एपिसोड १, काठमान्डु अडिसन’
डा. दामोदर रेग्मी असल शासनको कारणले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई लोकप्रिय शासन प्रणाली मान्ने गरिन्छ । जनमैत्रीय शासन प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल ध्येय हो । जनमैत्रीय शासन नै सुशासनको मूल आधार हो । सुशासन प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा अन्तरनिहित हुनुपर्ने अपरिहार्य अवयव हो । प्रजातन्त्र एउटा साधन हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली प्रक्रिया हो भने सुशासन प्रजातन्त्र […]
पहिरोले गुल्मीमा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भ
बुटवलका मेयर शिबराज सुबेदीमाथि आक्रमण
देशभर थपिए १०९५ कोरोना संक्रमित, थप ८ जनाको मृत्यु
बुधबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अनुसार बुधबार सुन तोलाको ९०० रुपैयाँ र चाँदी २५ रुपैयाँले बढेको हो । महासंघका अनुसार बुधबारका लागि छापावाला सुनको भाउ तोलाको ९० हजार १०० रुपैयाँ, तेजावी सुनको भाउ ८९ हजार ६५० रुपैयाँ र चाँदीको भाउ प्रतितोला १ हजार १६५ रुपैयाँ कायम […]
रसुवा, ४ असोज रसुवामा बायो इन्जिनियरिङ नर्सरी स्थापना गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले जिल्लाको कालिका गाउँपालिका- १ राम्चेमा बायो इन्जिनियरिङ नर्सरी स्थापना गरेको हो । सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटको नाममा रहेको पाँच रोपनी जग्गामा नर्सरी स्थापना गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले बताए । ‘सडक डिभिजन कार्यालयको नाममा पाँच रोपनी जग्गा रहेछ, त्यो यतिकै रहिरहेको […]
७ भाद्र २०७८, सोमबार
श्रावण २, २०७७ सप्तरी — कोरोना संक्रमणबाट सप्तरीमा एक व्यक्तिको निधन भएको छ । राजविराज नगरपालिका–६ का ७२ वर्षीय रामकृष्ण लालदासको बिहीबार राति ११ बजे धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारकै क्रममा निधन भएको हो । मुटुका रोगी लालदासको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि परिवारले असार ३० गते बिपी प्रतिष्ठान पुर्‍याएको थियो । उपचारअघि अस्पतालमै उनको स्वाब संकलन गरी […]
पोखरा, ४ असोज सत्ता समीकरण फेरिएपछि गण्डकीमा सबैभन्दा पहिले एमालेविहीन नयाँ सरकार बन्यो । कांग्रेस नेतृत्वमा चार राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सरकार गठन भएको हो । अहिले गण्डकीमा एमाले मात्रै विपक्षमा छ । जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि सत्तामा सहभागी भएको छैन । कांग्रेसका पाँच, माओवादीका चार, जसपाका एक र स्वतन्त्रका एकजना मन्त्री […]
पर्वत, १८ भदौ अविरल वर्षापछिको पहिरोले पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र मोदी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा पहिरोले घर पुरिँदा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका डिएसपी शिवराज बुढाथोकीकाअनुसार पहिरोले कुश्मा नगरपालिका ३ का एकै परिवारका पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा ७५ वर्षीया कौशिला पौडेल, ३५ वर्षीया भवगती पौडेल, १६ वर्षीया […]
पाल्पा– तानसेन नगरपालिका अर्चलेमा किसानहरुलाई बाख्रा उपाहार प्रदान गरिएको छ । तानसेन नगरपालिका र हेफर इन्टरनेश्लको सहयोगमा परियोजना क्षेत्रका किसानलाई बाख्रा वितरण गरिएको हो । तानसेन ५ अर्चलेमा तानसेन नगरपालिका हेफर प्रोजेक्ट नेपाल को आर्थिक सहयोग तथा ग्रामीण आर्थिक बिकास सघ (रेडा) द्वारा संचालित कृषि तथा पशु उधमशिलता बिकास परियोजना अन्तर्गत आदर्श स्वावलम्बन महिला द्वारा […]
दार्चुला, २९ भदौ दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका- ६ मा रहेको समैजी आधारभूत विद्यालयको भवन बाढी पहिरोले बगाउदाँ त्रिपालमुनि कक्षा संचालन भइरहेका छन् । २०७७ साउनमा आएको बाढी, पहिरोले विद्यालय भवन बगाउँदा त्रिपालमुनि कक्षा संचालन गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरकसिँह ठगुन्नाले जानकारी दिए । कोरोना संक्रमणका कारण विद्यालय बन्द अवस्थामा थियो । ‘गत वर्ष मंसिरदेखि चैतसम्म विद्यालय खुलेका थिए, घाम […]
Significance of Mekong Cooperation Project
आज देशभर रोपाइँ जात्रा मनाइदै
लागुऔषधमा पत्रकार फसाउन खाेज्ने रौतहटका दुई घुमुवा प्रहरी निलम्बित
बंगलादेशविरुद्ध डेब्यु गर्न सक्ने ५ महिला फुटबलर
by0२४ भाद्र २०७८, बिहीबार
महिला फुटबलको राष्ट्रिय टिममा एउटै जिल्लाका नौजना खेलाडी
by0९ भाद्र २०७८, बुधबार
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको नयाँ जर्सी सार्वजनिक, आदर्शको डिजाइन छनोट
न्यू डायमन्ड कप महिला भलिबलमा ७ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने
विष्णु माझिकाे चरि जेलैमा गीतले चर्चा वटुल्दै
पदयात्रा : रारादेखि खप्तडसम्म
Post By: merosamachar
डा. दामोदर रेग्मी असल शासनको कारणले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई लोकप्रिय शासन प्रणाली मान्ने गरिन्छ । जनमैत्रीय शासन प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल ध्येय हो । जनमैत्रीय शासन नै सुशासनको मूल आधार
Dilli Raman Subedi Mekong River co-operation project is being topical issue in Asian region. Various programs have been conducting on utilization of water resources in Asian region including Nepal. There
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पाए प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत
काठमाडौं, ७ भदौ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन् । सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री केसीले विश्वासको मत दिन प्रस्ताव गरेका थिए । सो प्रस्तावमाथि भएको